HS:- Siyaasadii guud ee Jubooyinka ayaa u muuqata iney waji kale yeelatay waxii ka danbeeyey qaraxii dhawaan ay koox ka tirsan Raaskaambooni doonayeen iney ku dilaan mid ka mid ah saraakiishii la shaqeynayey Ahmed madoobe oo lagu magacaabo Iftiin Xasan Baasto oo ay qaraxii la doonayey in isaga lagu dilo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen xaaskiisa iyo dhalinyaro ilaalo ka hayey gurigiisa.
Sida warar horudhac ah sheegayaan magaalada Ksimaayo waxaa ka taagan jahwareer siyaasadeed xili Ahm,ed Madoobe lagu maaweelinayo waftiyo uusan xitaa isagu aqoon wadamada ay ka soo jeedaan una badan sirdoonka reer galbeedka laakinse loogu sheegay iney ka socdaan dowladaha Yurub iyo QM.
Warku waxuu intaas ku darayaa ciidamo aad u hubeysan oo uu horkacayo Bare Hiiraale iney kaabiga ku hayaan Kismaayo qaar kale ciidamada ka tirsana saraakiil magaalada joogta ay fududeeyeen kuna sugan yahiin xaafadaha magaalada qaarkood.
Sidoo kale waxaa iyaduna laga cabsi qabaa in ay waxyeelo soo gaarto diyaaradaha ku dega magaalada Kismaayo kedib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ay ciidamda gudaha u galay magaalada joogaan meel ay ka toogan karaan diyaaradaha oo aan ka fogeyn garoonka.
La soco wararkeena danbe iyo Kismaayo.
· admin on July 23 2014 15:21:51 · 0 Comments · 1474 Reads ·
14,905,444 unique visits